Ruva rega rega rechirimwa rinoenderana nefetiraiza.
Iko kusanganiswa kwe organic uye inorganic mafetiraiza inzira yakakosha yekuvandudza kubereka kwevhu, kusanganisa kushandiswa kwepasi uye chikafu, uye kuwedzera kugadzirwa nemari. Mhedzisiro yacho yakaratidza kuti kusanganiswa kwemakemikari fetiraiza uye mashanga ...
Organic fetiraiza mupiro mukurima
1. Kuvandudza kubereka kwevhu 95% yezvikamu zvekutsvagisa muvhu zviripo mune isingasviki fomu uye haigone kumisikidzwa uye kushandiswa nezvirimwa. Zvisinei, microbial metabolites ine nhamba yakawanda ye organic acids. Zvinhu izvi zvakaita semvura inopisa inowedzerwa muchando. Tsvaga e ...
Misiyano minomwe Pakati peOganiki Fertilizer uye Chemical Fertilizer
Organic fetiraiza: 1) Iine yakawanda yezvinhu zvakasikwa, izvo zvinogona kusimudzira ivhu kubereka; 2) Inemhando dzakasiyana dzezvakavaka uye zvinovaka muviri zvakaenzana munzira yekutenderera; 3) Izvo zvinovaka muviri zvakaderera, saka zvinoda kuzadzikiswa kwakawanda; 4) Iyo feri ...
Makomborero Manomwe eOganiki Fertilizer
Basa rakakosha kwazvo reOrganic Fertilizer kugadzirisa ivhu rezvinhu zvakasikwa, kugadzirisa ivhu nemakemikari eivhu, kugadzirisa kugona kwekuchengetedza mvura kwevhu uye kuchengetedza fetiraiza, nekubatsira zvirimwa kuwedzera goho uye kuwedzera mari. ...
Basa reOrganic Fertilizer
Organic fetiraiza inobva muzvirimwa kana mhuka. Icho chinhu chekabhoni chinoiswa muvhu kuti ipe chikafu chemiti seiri basa rayo guru. Kuburikidza nekugadziriswa kwezvinhu zvipenyu, mhuka nemiti marara uye zvisaririra zvemiti, izvo zvine chepfu uye zvinokuvadza zvinhu zviri e ...
Zvitanhatu Zvakanakira Organic Fertilizer Yakasanganiswa neChemical Fertilizer
1. Tinofanira kushandisa zvakanaka zvakanakira nekuipira kuvandudza kubereka kwevhu. Chemical fetiraiza ine chinhu chimwe chete chemuviri, zvakakwirira zvemukati, nekukurumidza fetiraiza maitiro, asi ipfupi nguva; fetiraiza iine hutachiona hwakakwana uye hwakareba manyowa, ayo ca ...
Shandisa shoma kemikari fetiraiza uye yakawanda organic manyowa
Kunyanya kushandiswa kwemakemikari fetiraiza kunoparadza kubereka kwevhu.Mushonga wakawanda wemakemikari unotungamira kukudziridzwa kwehutano, simbi inorema uye zvine chepfu zvinhu muvhu, uye kudzikiswa kwezvinhu zvakasikwa, izvo zvinokonzeresa kusvibiswa kwenyika, uye kunyangwe ...
Room 1213, No. 662, HuangPu Middle Road, Financial muzinda, Tianhe District, Guangzhou, China
Ruva rega rezvirimwa rinoenderana nechero ...
Organic fetiraiza mupiro agricu ...
Misiyano minomwe Pakati peOrganic Fertili ...
© ANYWIN © Copyright - 2021: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Hot Zvigadzirwa - Sitemap
Humic Acid Organic Fertilizer, Bulk Organic Fertilizer Vanopa, Organic Fetiraiza Yekudyara, Organic Compound Fetiraiza, Organic Fertilizer Kugadzira, Organic Fetiraiza Mugadziri,